Wararka - Maxaad ciyaalka shucaaca iyo dulqaadku isku mid u ahayn?
Maxaa radial play iyo dulqaadku isku mid u ahayn
Waxaa jira waxoogaa jahwareer ah oo ku xeeran xiriirka ka dhexeeya saxda saxda ah ee culeyska, dulqaadkeeda wax soo saarkeeda iyo heerka nadiifinta gudaha ama 'ciyaarta' ee u dhaxeysa waddooyinka tartanka iyo kubadaha. Halkan, Wu Shizheng, oo ah agaasimaha maamulka ee khabiirka yar yar iyo kan yar khabiirka JITO Bearings, ayaa iftiiminaya sababta khuraafadani u sii socoto iyo waxa injineerada ay tahay inay iska fiiriyaan.
Intii lagu guda jiray Dagaalkii Labaad ee Adduunka, warshad ku taal Scotland, nin yar oo caan ah oo lagu magacaabo Stanley Parker ayaa soo saaray fikradda mowqifka dhabta ah, ama waxa aan maanta u naqaanno Joometric Dimensioning & Tolerancing (GD&T). Parker wuxuu ogaaday in inkasta oo qaybo ka mid ah shaqooyinka loo soo saaray torpedoes-ka la diido kormeerka ka dib, hadana wali waxaa loo dirayaa wax soo saar.
Markuu si dhow u kormeeray, wuxuu ogaaday inay tahay cabirka dulqaadka inay eeda leedahay. XY iskuduwaha isu-dulqaadku wuxuu abuuray aag dulqaad laba jibbaaran, kaas oo laga reebay qaybta inkasta oo ay hal dhibic ku haysay meertada wareegsan ee udhaxeysa geesaha laba jibbaaran. Wuxuu sii waday inuu daabaco natiijooyinkiisa ku saabsan sida loo go'aamiyo booska dhabta ah ee buug cinwaankiisu yahay Sawirro iyo Cabirro.
* Nadiifinta gudaha
Maanta, fahamkani wuxuu naga caawinayaa inaan horumarinno jaangooyooyinka muujinaya heer ka mid ah ciyaarta ama dabacsanaanta, haddii kale loo yaqaan nadiifinta gudaha ama, gaar ahaan gaar ahaan, radial iyo ciyaar axial ah. Raadiyaha Radial waa nadiifinta lagu cabiray dhinaca dhidibka sita iyo axial play waa nadiifinta lagu cabbirayo barbar dhidibka dhalista.
Cayaartani waxaa loogu talagalay in lagu soo qaado bilowga si loogu oggolaado culeysku inuu taageero culeyska xaalado kala duwan, iyadoo la tixgelinayo arrimo ay ka mid yihiin ballaarinta heerkulka iyo sida isugeynta u dhexeysa giraanyada gudaha iyo kuwa kore ay saameyn ugu yeelan doonaan nolosha dhalista.
Gaar ahaan, nadiifintu waxay saameyn ku yeelan kartaa buuqa, gariirka, culeyska kuleylka, leexashada, qeybinta culeyska iyo nolosha daalka. Ciyaarta shucaaca sare waa mid la jecel yahay xaaladaha marka giraanta gudaha ama usheeda dhexe la filayo inay ka sii kululaato oo ay ballaadho inta lagu jiro isticmaalka marka la barbar dhigo giraan ama bannaanka guriga. Xaaladdan oo kale, ciyaarta ciyaarta ayaa hoos u dhigi doonta. Taas bedelkeeda, ciyaarta ayaa sii kordheysa haddii giraanta kore ay ka ballaarto wax ka badan giraanta gudaha.
Ciyaarta axial sare waa suurad wacan in nidaamyada halkaas oo ay jirto qalad u dhexeeya usheeda dhexe iyo guriyeynta sida khaldamaynta waxay sababi kartaa cilad leh nadiifin yar oo gudaha ah si dhakhso ah u fashilmaan. Nadiifinta weyn waxay sidoo kale u oggolaan kartaa culeyska inuu la qabsado culeysyo xoogaa yar oo riix ah maadaama ay soo bandhigeyso xagal xiriir oo sareeya.
Waa muhiim in injineeradu ay ku dheelitiraan dheelitirka saxda ah ee nadiifinta gudaha ee culeyska. Xannibaadda xad dhaafka ah ee ciyaarta oo aan ku filnayn ayaa dhalin doonta kuleyl xad dhaaf ah iyo isqabqabsi, taas oo sababi doonta in kubbadaha ay ku ordaan wadada tarabuunka isla markaana ay dardar geliyaan xirashada. Sidoo kale, nadiifinta badan waxay kordhin doontaa buuqa iyo gariirka waxayna yareyn doontaa saxnaanta wareega.
Nadiifinta waxaa lagu xakamayn karaa iyadoo la adeegsanayo qalabyo kala duwan. Injineeriyadu waxay kuxirantahay tixraaca nadiifinta udhaxeysa laba qaybood oo isku dhegan. Tan waxaa badanaa lagu sifeeyaa inay tahay usha godka waxayna u taagan tahay heerka cidhiidhiga ama dabacsanaanta u dhexeeya usheeda dhexe iyo giraanta gudaha iyo inta u dhexeysa giraanta dibadda iyo guryaha. Waxay caadi ahaan isu muujisaa isku-dabacsan, ku-habboonaanta nadiifinta ama isku-dhafan, ku-habboonaanta faragelinta.
Xadhig adag oo u dhexeeya giraanta iyo usheeda dhexe ayaa muhiim ah in lagu hayo meesheeda isla markaana laga hortago gurguurashada ama siibashada aan loo baahnayn, taas oo abuuri karta kuleyl iyo gariir isla markaana sababi kara xaaluf.
Si kastaba ha noqotee, faragelinta faragelinta waxay yareyn doontaa nadiifinta kubbadda sida ay u ballaarinayso giraanta gudaha. Qalab isku mid ah oo adag oo udhaxeeya guryaha iyo giraanta banaanka ee ku xiran xariiq yar oo radial ah ayaa isku dhejin doona giraanta dibedda waxayna yareyn doontaa nadiifinta xitaa dheeraad ah. Tani waxay ku dambayn doontaa nadiifin gudaha ah oo taban - oo si wax ku ool ah u bixinaysa usheeda dhexe oo ka weyn godka - waxayna u horseedaysaa isqabqabsi xad dhaaf ah iyo fashil hore.
Ujeeddadu waa in aan lahayn eray ciyaar hawlgal ah marka culeysku ku socdo xaalad caadi ah. Si kastaba ha noqotee, ciyaarta bilowga ah ee loo yaqaan 'radial play' ee loo baahan yahay si loo gaaro tan waxay sababi kartaa dhibaatooyin kubbadaha isdabajoogga ama siibidda, yaraynta qalafsanaanta iyo saxnaanta wareega. Ciyaartan radial ee bilowga ah waa lagaa saari karaa iyadoo la isticmaalayo preloading. Rarridda waa hab lagu rakibo culeys waara oo joogto ah sariirta, markii la xiro, iyadoo la adeegsanayo makiinado dhaq ama ilo biyo ah oo ku dheggan giraanta gudaha ama dibedda.
Injineerradu waa inay sidoo kale tixgeliyaan xaqiiqda ah inay fududahay in la yareeyo nadiifinta qaybta khafiifka ah maxaa yeelay siddooyinku waa khafiifsan yihiin waana sahlan tahay in la qaabeeyo. Maaddaama ay tahay soo saare wax-soo-saar yar iyo mid yarba, JITO Bearings waxay macaamiisheeda kula talineysaa in taxaddar dheeraad ah la siiyo iyadoo loo marayo dhisme-guri-guri. Mashiinka iyo wareega guryaha ayaa sidoo kale aad muhiim ugu ah laalaabyada nooca khafiifka ah sababta oo ah usheeda dhexe ee wareega ah ayaa qaloocinaya faraantiyada khafiifka ah waxayna kordhin doontaa buuqa, gariirka iyo xaragada.
Isfaham la'aanta ku saabsan doorka shucaaca iyo ciyaarta axial ayaa keentay in dad badani isku qaldaan xiriirka ka dhexeeya ciyaarta iyo saxsanaanta, gaar ahaan saxnaanta ka dhalata dulqaadashada wax soo saar wanaagsan.
Dadka qaarkiis waxay u maleynayaan in sinta saxda ah ee sarreysa aysan laheyn wax ciyaar ah oo ay tahay inay si sax ah u rogrogto. Iyaga, ciyaarta shucaaca ah ee dabacsan waxay dareemaysaa wax ka yar oo sax ah waxayna siinaysaa aragti tayo hoose leh, in kasta oo ay noqon karto mid sax ah oo saxa oo si ula kac ah loogu qaabeeyay ciyaar dabacsan. Tusaale ahaan, waxaan weydiinay qaar ka mid ah macaamiisheenna waagii hore sababta ay u doonayaan saxitaan sare oo waxay noo sheegeen inay rabaan, “in la yareeyo ciyaarta”.
Si kastaba ha noqotee, waa run in dulqaadku hagaajiyo saxnaanta. Muddo aan dheereyn kadib soo bixitaankii badnaa, injineeradu waxay ogaadeen in aysan ahayn wax la taaban karo ama dhaqaale ahaan, haddii xitaa ay suurtagal tahayba, in la soo saaro laba shey oo isku mid ah. Xitaa marka dhammaan doorsoomayaasha wax soo saarka isku mid laga dhigo, had iyo jeer waxaa jiri doona farqi daqiiqado u dhexeeya hal unug iyo kan xiga.
Maanta, tani waxay u timid inay matasho dulqaad la oggol yahay ama la aqbali karo. Fasallada dulqaadka ee dulqaadashada kubbadda, oo loo yaqaan qiimeynta ISO (metric) ama ABEC (inch), ayaa nidaamiya weecashada la oggol yahay iyo daboolidda oo ay ku jiraan cabbirka giraanta gudaha iyo dibedda iyo wareegyada siddooyinkooda iyo jidadka tartanka. Markuu fasalku sii kordhayo oo dulqaadku sii adkaanayo, ayaa saxnaanta saxda ahi noqon doontaa mar la ururiyo.
Adoo garaacaya isku dheelitirka saxda ah ee udhaxeeya iyo radial iyo axial play inta lagu gudajiro isticmaalka, injineerada waxay gaari karaan nadiifinta hawlgalka eber ee saxda ah waxayna hubin kartaa buuqa hoose iyo wareega saxda ah. Marka sidaas la samaynayo, waan nadiifin karnaa jahwareerka u dhexeeya saxnaanta iyo ciyaarta iyo, si la mid ah sidii Stanley Parker uu u beddelay cabbiraadda warshadaha, aasaas ahaan u beddelno qaabka aan u eegno beenta.